Mukhtaar Rooboow oo u sharaxan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed So. | Weheliye Online
Mukhtaar Rooboow oo u sharaxan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed So.
Mukhtaar Rooboow Cali Abuu-Mansuur oo horay u soo noqday ku-xigeenka Amiirka Xarrakada Al-shabaab, laakiin sanadkii 2017da si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka baxay Ururka, ayaa hadda isku diyaarinaya in uu ka mid noqdo musharixiinta u taagan doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Musharixiintan dhamaantood marka la eego waxaa ay u muuqdaa kuwo ku mideysan in tallada maamulka Koonfur Galbeed kala wareegaan Shariif Xassan Sheekh Aadan oo dhinaciisa siweyn ugu diyaar garoobay doorashada iyo in mar kale uu hoggaamiyo maamulka Koonfur Galbeed.
Mukhtaar Rooboow oo laga saaray Liiska Argagixisada Mareykanka ayaa wada kulamo uu la leeyahay qeybaha kala duwan ee bulshada isaga oo doonaya in uu isku soo taago doorashada madaxweynaha ma
Previous articleGolaha Aqalka Sare oo wafdi xal raadina u diraya Maamu Goboleedyadda dalka
Next articleGudoomiyihii hore ee B.M.GalMudug Cali Gacal Casir oo ka hor yimid xil ka qaadistii lagu sameeyay